प्रदेश खबर Archives - Page 84 of 159 - Paschimnepal.com
Oct72017 by Paschim NepalNo Comments
थानीद्वारा महासंघ सुर्खेतलाई १० लाख दिने घोषणा
सुर्खेत । सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ का सांसद् हृदयराम थानीले नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सुर्खेतलाई १० लाख रुपैया“ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । महासंघ शाखा सुर्खेतको भवनको तला थप गर्न सो रकम दिने घोषणा गरेका हुन् । पूर्व मन्त्री समेत रहेका थानीले शनिवार वीरेन्द्रनगरमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै भवनको तला थप्न १० लाख सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । सांसद् विकास कोषमार्पmत आउने रकममध्ये म
प्रदेश ६ काे मुख्यमन्त्रीमा पुरानाभन्दा नयाँ अनुहार किन ?
नेपालगन्ज । कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई धेरैले पार्टीका तर्पmबाट ६ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री उम्मेदवार हुने अनुमान गरेका थिए । तर, उनी सुर्खेत क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एकल उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस भए । खड्का निकटका अनुसार राष्ट्रिय राजनीतिमा उचाइ बनाइसकेका उनको ‘दूरदृष्टि’ केन्द्रीय सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिमै छ । आसन्न प्रदेशसभा निर्वाचनबाट पहिलोपटक बन्न लागेको प्र
शाहको नाममा पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना
जाजरकोट । गत वर्षको चैत १५ गते सदरमुकाम खलंगाको थाप्लेचौरमा निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएका नेपाली काँग्रेसका स्थानीय नेता रवीन्द्र शम्शेर शाहको नाममा पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना गरिएको छ । नेपाल प्रेस युनियन जाजरकोटले आज खलंगामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पाँच हजार राशिको रवीन्द्र शाह स्मृति विकास पत्रकारिता पुरस्कार स्थापनाको घोषणा गरेको हो । नेपाल प्रेस युनियन जाजरकोट शाखाका संस्थापक सदस
एघार महिने बालकलार्इ मष्तिस्कमा पक्षघात, उपचारार्थ सहयाेगकाे अपिल
सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्वर १३ का एक बालककोलाई मृत्युको मुखवाट बचाईदिन उनका आफन्तले अग्रह गरेका छन ।वीरेन्द्रनगर १३ करैखोलाका एघार महिनाका मोहित लामीछानेलाई मष्तिस्कमा पक्षघात भएकाले सुर्खेतमा उपचार सम्भव नभएको सुर्खेतका डाक्टरहरुले बताएपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण बाहिर उपचारका लागि लग्न नसकीएको मोहितका बुबा कुलप्रशाद लामीछानेले बताए । जन्मेदेखिनै आफ्नो बच्चाको हात खुट्टा
Oct62017 by Paschim NepalNo Comments
सुर्मादेवी मेलामा मदिरा सेवन गर्नेलाइ २२ सय र विक्रेतालार्इ पाँचहजार जरिवना
बझाङ । जिल्लाको सदरमुकाम चैनपुरमा लाग्ने ऐतिहासिक सुर्मादेवी मेला बिहीबारबाट शुरु भएको छ । वर्षेनी बडादशैँपछि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनमा लाग्ने सुर्मादेवी मेलामा सुर्मा मन्दिरमा पूजाआजा गर्नुका साथै महिला पुरुषका डेउडा खेल भलिबल प्रतियोगिता र सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरी धुमधामका साथ तीन दिनसम्म मनाइने गरिन्छ । यस पटकको मेलामा अन्तर जिल्लास्तरीय भलिबल प्रतियोगिता र महिला पुरुष डेउडा खेल र
नौ वर्षीय बालक बेपत्ता
डडेल्धुरा । डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–९ सत्घाटका ९ वर्षीय एक बालक एक सातादेखि बेपत्ता भएका छन् । असोज १४ गते सत्घाट नजिक पर्ने खानीडाँडामा दशैँको मेला हेर्न गएका बालक विवस बोहरा घर नफर्केको उनका आमाबुबाको भनाइ रहेको छ । मेला हेर्न गएको छोरा बेलुका नै फर्केला भन्ने सोचेको थिए तर करिब साता बितिसक्दा पनि केही पत्ता नलागेको विवसका बुबा केशव बोहराले बताउनुभयो । आफन्त कहाँ गयो कि भनेर सबै ठाउँ
जबरर्जस्ती करणी गर्न खोज्ने पक्राउ
कञ्चनपुर । सुस्तमनिस्थिति भएकी एक महिलालाई जबरर्जस्ती करणी गर्न खाज्ने ई–रिक्सा चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका– १८ जानकी टोलमा एक ३८ वर्षीया महिलालाई जबरर्जस्ती करणी गर्न खोज्ने बैतडी घर भई हाल बसपार्कमा डेरा गरी बस्ने २७ वर्षीय गजेन्द्र विष्टलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बिहीबार पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चन
दाङ । माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर दाङमा आज एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– १८ का ५३ वर्षीय चित्रबहादुर नेपाली रहेका छन् । ग्वार खोलामा करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका नेपालीलाई राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरमा उपचारका लागि ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ ।
वर्षातमा अवरुद्ध ग्रामिण सडक सुचारू भएनन्
दार्चुला । वर्षातमा अवरुद्ध जिल्लाका ग्रामीण सडक अझै सञ्चालनमा आएका छैनन् । जिल्लाका करिब आधा दर्जन सडक सञ्चालन नहुँदा स्थानीयले आवतजावतमा समस्या खेप्नुपरेको छ । गोकुलेश्वर–देथला–दल्लेख, लटिनाथ–पारिबगड, बङ्गाबगड–दल्लेख, तिंकर सडकको खलंगा–गरमोरा र गोकुलेश्वर–लटिनाथ सडक बेलाबेला अवरुद्ध हुने गरेका छन् । यी सबै कच्ची भएकाले वर्षात्मा सधैं अवरुद्ध हुने र सुख्खायाममा मात्र चल्ने गर्छन् । सदरमुकाम जोड
तीन महिनादेखी फाेन सेवा अवरूद्ध
डाेल्पा । सदरमुकामलगायतका क्षेत्रमा पटकपटक टेलिफोन र मोबाइल सेवा अवरुद्ध हुँदा स्थानीयलाई सास्ती भएको छ । सदरमुकाम दुनैलगायतका स्थानमा नेपाल टेलिकमका नमस्ते र स्काई मोबाइलको नेटवर्क तीन महिनादेखि बेलाबेला अवरुद्ध हुने गरेको छ । मोबाइल, टेलिफोन र इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका ४ का छक्कबहादुर धरालाले बताए । उनका अनुसार एनसेललगायतका मोबाइल पनि बेलाबेला अवरुद्ध